Ihe ntanetị nke kachasị mma maka ihe ntanetịime weebụ maka ndị na-enweghị mmemme
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na data na iji weebụ dị ka data isi isi, ị nwere ike ịnụ banyere ntanetị weebụ. E nwere ọtụtụ narị ngwá ọrụ software, ma ngwaọrụ ndị dị n'okpuru ebe a bụ ihe kasị mma maka ndị na-abụghị ndị mmemme. N'iji ha mee ihe, ị nwere ike nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gị, Twitter na Facebook data gaa na spreadsheets Excel
Nchapu (Chrome Mgbatị)
Ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị kachasị mma maka ebe ndị ọrụ nkịtị. Ntucha ihe dị mfe ma dị ịtụnanya ma bara uru maka nchịkọta ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ngwá ọrụ a, ị ga-enwerịrị Google Chrome ka ọ bụrụ ihe nchọgharị gị dịka ngwá ọrụ a anaghị arụ ọrụ ọ bụla nchọgharị ọ bụla. Ị nwere ike iji usoro a dị ebube n'ọtụtụ ụzọ. Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị ga-ehichapụ aha aha ma ọ bụ URL nke Google, ị ga-ezipụta isiokwu ma ọ bụ aha nke ibe ahụ. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịkọwa kọntaktị òké ahụ na data ahụ wee pịa bọtịnụ Scrape.
APIs Facebook na Twitter
Mgbe ị na-eji Twitter na Facebook API, ị nwere ike nyochaa nnukwu ọnụọgụ data na faịlụ ndị na-asọmpi ọha na eze ma nwee ike nyochaa ihe na-arụ ọrụ kasị mma maka azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. API bụ n'ezie interface nke na-eme ka ihe omume iri atọ na atọ nwee ike ịnweta usoro mgbasaozi mgbasa ozi gị. Nke kachasị mma bụ na ngwá ọrụ a na-abịa n'efu, ọ dịkwa mma maka ndị na-abụghị onye mmemme..Ịbanye na API ya bụ n'efu, na ịkwesighi ide ederede koodu ọ bụla.
Import.io, dịka ọmụmaatụ, bụ ihe ntanetị weebụ dị ike nke na-enyere aka ịgba ma ọ bụ wepụ data na ụzọ ka mma. Ọ nwere ngwaọrụ anọ a ma ama: Ime Anwansi, Crawler, Njikọ, na Extractor. Nke kachasị mma bụ na ngwaọrụ ndị a nile dị 100% nchekwa, nchekwa ma dị ukwuu iji nye ndị na-amaghị ihe gbasara mmemme. Ha nwere ike iwepụ gị ọtụtụ peeji nke ịchọrọ. Iji mmemme ndị a, ndị na-abụghị ndị na-eme ihe omume nwere ike nweta nsonaazụ ọma ma nweta data ha chọrọ maka azụmahịa ha.
Kimono Labs bụ usoro ihe nchịkọta ihe ntanetị anya nke ọma nke nwere ike inye aka wepu data sitere na weebụsaịtị ndị dị mkpa ma dị ike nke nwere ọtụtụ ihe oyiyi na faịlụ vidio dị arọ. Ngwaọrụ a jikọtara na ọdụ data dị iche iche ma jide n'aka na ị ga-enye nsonaazụ kachasị mma. Ọ nwere interface dị mfe ma dị mma nke na-eme ka Kimono Labs bụrụ nhọrọ dị mma maka ndị na-abụghị onye mmemme. Ụfọdụ n'ime ihe ndị a ma ama bụ nkwado proxy, na-edozi ụdị, nhazi usoro data, na ntanetị weebụ. Kimono Labs na-arụ ọrụ yiri nke Import.io, ma mmemme abụọ ahụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu atụmatụ na ọrụ ndị ahụ.
A na-emepụta ngwá ọrụ weebụ ndị a na-enweghị atụ maka ndị na-abụghị ọkachamara. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ịpị ụfọdụ ibe weebụ ma amaghị otú e si amalite, naanị ị ga-achọ ịnweta ngwaọrụ ndị a ma chọpụta nkuzi ịntanetị banyere otu esi esi wụnye ma rụọ ọrụ ha. Ọzọkwa, ị nwere ike iji ha na ụzọ dị iche iche dabere na gị blog ma ọ bụ weebụsaịtị Source .